अमेरिकामा ग्रीनकार्डका लागि नक्कली बिबाह: नराम्ररी फसे यी नेपाली युवा - VOICE OF NEPAL
७ माघ २०७५, सोमबार २१:४९ 365 ??? ???????
ग्रिनकार्डमा लागि नक्कली बिबाह गरेको अभियोगमा एक नेपाली युवा नराम्ररी फसेका छन्। उनी क्यालिफोर्नियाको कुपर्टिनो निवासी २७ वर्षिय इलोभ श्रेष्ठ हुन् ।उनीमाथि १३ हजार डलर दिएर मेन राज्यको हाम्पडेन निबासी २८ वर्षिया मोरेना मुसेरोसँग नक्कली बिवाह गरेको अभियोग लागेको छ।
मेन राज्यको स्थानिय बंगोर डेली पत्रिकाले जनाएअनुसार जनवरी ११ मा क्यालिफोर्नियाको सान होसेको संघीय अदालतमा हाजिर भएका श्रेष्ठ ५० हजार डलर धरौटीमा छुटेका थिए। उनले जनवरी २८ मा मेनको बंगोरस्थित संघीय अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने छ।
सन् २०१५ मा ६ महिनाको भिजिटर भिसामा अमेरिका आएका श्रेष्ठले जुन मुसेरोले ग्रिनकार्ड चाहने केटाले बिबाह गर्न सक्ने विज्ञापन १, २०१८ मा एउटा डेटिड. साईटमा राखेको देखे।जुन १३ मा श्रेष्ठले इमेलमार्फत उनलाई सम्पर्क गरेर १३ हजार किस्तामा दिने गरेर नक्कली बिबाहका लागि सम्झौता गरे।
लामो समयदेखि कागजबिहीन अवस्थामा अमेरिकामा बस्दै आएका श्रेष्ठको अमेरिका बस्ने दिन सम्भवत: सकिदैछ। अभियोग प्रमाणित भएमा उनलाई पाँच वर्ष जेल र दुईलाख ५० हजार डलरसम्म जरिवाना त हुन्छ नै नेपाल फर्काइन पनि सकिन्छ।
बंगोर डेलीका अनुसार श्रेष्ठ नर्थ क्यारोलिना हुँदै जुन २४ मा बंगोर पुगे जुन २५ मा मुसेरोसँग बिबाह गरे।त्यसको अर्को दिन नर्थ क्यारोलाइना फर्केका श्रेष्ठले जुलाईको अन्त्यमा बंगोर पुगेर मुसेरोलाई तीनहजार अमेरिकी डलर दिए ।
गत अगस्ट ६ मा मुसेरोले स्थानीय प्रहरीलाई नक्कली विवाह गरेको बताए पछि लामो अनुसन्धान गरेर गत नोभेम्बरमा श्रेष्ठमाथि नक्कली बिबाह गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरियो ।
नक्कली विवाह गरेको अभियोगमा मुसेरो डिसेम्बर १० देखि जेलमा छिन्। उनलाई पाँच वर्ष जेल र दुईलाख ५० हजार डलर जरिवाना तोकिएको छ।
अमेरिकामा बस्ने प्रयोजनले नक्कली विबाह गरेको अभियोग प्रमाणित भएमा उनलाई कानुनत: पाँच वर्ष जेल र दुईलाख ५० हजार डलरसम्म जरिवाना हुनेछ।उनले विवाह गरेकी भनिएकी मुसेरोको अभियोग प्रमाणित भैसकेकाले उनी पनि दोषी हुने सम्भावना नै बढी छ।
यसै पनि श्रेष्ठ लामो समयदेखि कागजबिहीन अवस्थामा अमेरिकामा बस्दै आएकोे देखिन्छ।अभियोग प्रमाणित भएमा उनलाई नेपाल फिर्ता पठाइन सकिने छ।